Taariikhda My Butros » Dating Gabadh yar ka dib Furriinka ufududaynay
Dating Gabadh yar ka dib Furriinka ufududaynay
Last updated: Dec. 11 2019 | 2 min akhri
No more faraq Age in xiriirka galmada waa ifafaale aan caadi ahayn. Si kastaba ha ahaatee, dadka ka tirsan kooxaha qaarkood ay ka qayb qaataan xiriirka sida inta badan dadka kale. Tusaale ahaan, sida lagu sheegay daraasad cusub oo lagu daabacay Guurka iyo Review Qoyska, ragga la furay u badan tahay in taariikhda iyo guursan haween badan yaraa badan.
Waa maxay sababta dadka badankiisu furay eegto in taariikhdana haweenka da'da yar?
Cilmi nafsi yaqaanada ka hadlaan arrimo dhowr ah in ay riixaan laga yaabaa in rag furay si ay u eegaan dumarka badan yaraa badan u shukaansi. Liiska hoos ka mid ah kuwa ugu badan oo iyaga ka mid ah.
– Waxay heli habdhaqanka riixdey ee haweenka da'da yar Arrar.
– Furitaanka ka dib a, Dadka badankiisu waxay u baahan yihiin waqti badan inuu ka soo kabsado; sida ay horeyba u shucuur Dhibaataysan, ay door bidaan in ay taariikhda haweenka ugu yaraan caadifadeed. Gabdhaha, sabab u ah waayo aragnimo shukaansi yar, guud ahaan qaadi Walaalkii Alaabtiisa ka yar shucuurta.
– Gabdhaha yartahay in ay ku cadaadiso ragga in aan dago oo ay leeyihiin qoyska ka mid ah. Sida caadiga ah waxay wax badan ka fekerto joogo ka badan oo ku saabsan mustaqbalka; ay jecel ee ku nool xilligan. Lahaanshaha ajandaha lahayn si toos ah Dibadu shukaansi xiiso dheeraad ah oo nin oo la furay.
– Waa fududahay inaad caddayn haweenka da'da yar. nin la furayna in ay 40 ee, 50'S ama 60 ee caadiga ah haysan lacag kugu filan in ay qaataan oo ay la-hawlgalayaasha yar in meelaha la yaab leh ay (gabdhaha) weligey si, iibsan hadiyado ay waligood ku riyoon jiray helitaanka iyo xalinta dhibaatooyinka ay (kuwaas oo ah kuwa inta badan ka gubanayn) waayo aragnimo weyn. Camallada waxa inta badan waa ku filan si ay u Zidane uu saameyn waarta ku haween dhalinyaro ah.
In kasta oo dhammaan qodobada kor ku xusan ka wada hadleen leeyihiin qaar ka mid ah door inuu u ciyaaro markii nin furay go'aansato inaad la haasawdo dumar badan ka yar isaga ka badan, Waxaa jiri karo sabab kale oo wax ku ool ah ka dambeeya doorashada ninkii. Waxaa jira nin oo bilawdo haweenka da'da yar uun sababtoo ah ma ay heli karaan qof walba ee la da'da ah. Statistics muujisaan in Furitaanka ugu badan ee Mareykanka ku meel qaadan markuu ninkii gudaha xiriirka ka dhexeeya uu yahay 53 iyo 72 sano jir; Dumar aad u yar tirsan facan sii hal.
Furayna? Dating qof dumar ah oo yar? Waxyaalahan maskaxda ku Hayso
Marka shukaansi qof dumar ah oo wax badan ka yar waxaad ka badan, waa in aad maanka ku hayn wax gaar ah.
– Your lamaanahaaga ogyahay in aadan cutubka ugu da'da yaraa ee agagaarka; sidaa, ha isku dayin in aad cadaysaa in aad ka mid. Ha xiran yahay Midabkeedu, in aanad si raaxo leh in; ma wax oo inta badan soo sameeyo by guys jiilka hadda joogaa sameeyaan; ha ka yeelin in ay isku day muujiyo in aad weli xoog ku filan. Kuwani waa turnoffs badanaa weyn Haweenay, dhallinyaro ama duq.
– Ula dhaqan lamaanahaaga dhalinyarada si la mid ah sida aad loola dhaqmi lahaa qof dumar ah oo ka mid ah da '. Haddii aad miyir ku saabsan faraq da'da, xiriirka aan shaqayn doonaan.
– Waxaad hubaal iibsan kartaa hadiyado naagta cusub ee aad noloshaada, laakiin waa in aad marnaba ka badin. Haddii aad aad u badan ee lacag caddaan ah iftiimiyo, naagtii u malaynayso in aad u doonayeen si ay u muujiyaan off.
Xiriirka u dhexeeya nin waayeel ah iyo qof dumar ah oo ka yar yahay sida caadiga ah wax kasta oo xidhiidh jacayl ah oo joogto ah. Sidaas, haddii nin furay muuqataa in taariikhdana qof wax badan ka yar ma jiraan wax qalad ah in la.
Six Flags Red kaalinta maalinta ugu horeysa ee
Secret of Kiss a Great
Sidee inaad soo saari kartid Madow Online Profile Dating ah?